+++ Coming Soon " UG Myanmar Online Magazine " +++ | Myanmar Black Hacking
9 +++ Coming Soon " UG Myanmar Online Magazine " +++
မကြာခင်ထုတ်ဝေမယ့် UG ကိုယ်စားပြု ပထမဆုံးသော Online magazine ကို ကျွန်တော်တို့ လည်း တပြားတချပ်ရဖို့ပိုက်ဆံနဲ့ရောင်းစားတာမဟုတ်တဲ့အတွက် magazine အတွက် စာရေးသူတွေရော ကျွန်တော်တို့MBH အနေနဲ့ လည်း ငွေကြေားတပြားတချပ်မယူပါဖူး .
knowledge တစ်ခုရစေဖို့ တွက် မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဖက်က ပညာဒါနာသဘောမျိုး မျှဝေလက်ဆင့်ကမ်းကြတာပါ .
MBH မှာ ဘယ်သောအခါမှ ငွေကြေးကောက်ခံတာမျိုးရော လက်ခံတာမျိုးလည်း (လုံးဝ)မလုပ်ပါဖူး.
စာမူခဘယ်လောက်ရမလဲ ရေးပေးမယ်ဆိုရင် ' ဟုတ်ကဲ့ အားတော့နာပါတယ် မရေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ လည်း ငွေမျက်နှာမကြည့်သလို သူများကို စာမူခ အလကားပေးဖို့ လည်း ချမ်းသာမနေတဲ့အတွက် မိမိတို့ တတ်နိုင်သလောက်သာလုပ်သွားမှာပါ '
မကြာခင်ထွက်လာမယ့် Magazine ကို Online ကနေ Public ဖြန့် ဝေပေးပါမယ် :)
Labels: Ebooks . Hacking New
May 19, 2016, 2:53:00 AM
Zaw Lay said...
May 19, 2016, 4:33:00 AM
​ဗဟုသုတ​တွေ​ပေးတဲ့ အတွက်​လဲ အများကြီး​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​
May 19, 2016, 4:37:00 AM
maung zaw zaw said...
Jun 2, 2016, 4:56:00 AM
Kaung htet zaw said...
Aug 8, 2016, 1:53:00 AM
Hello ! John - http://www.myanmarblackhacking.com/2016/06/ugmh-magazine-pdf.html
Aug 14, 2016, 5:34:00 AM
Thanksalot par brother!
Feb 18, 2018, 11:06:00 PM
Mar 12, 2018, 8:43:00 AM